ကင်းပုံသီး(အခါး) ငရုတ်သီးထောင်း ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
Sunday, April 27, 2014 Taunzalat
ကင်းပုံသီး(အခါး) .....၅ - ၆ လုံးခန်.
ဆား+ ဟင်းခတ်မှုန်. ..လိုအပ်သလို
ငရုတ်ခြောက်တောင့်နဲ.ကြက်သွန်ဖြူ ကိုမီးအေးအေးမှာ မွှေးနေအောင်လှော်ပါ
ကင်းပုံသီးတွေကို မီးဖို အောက်မှထည့်ဖုတ်ပေးပါ။ကျက်အောင်ဖုတ်ပေးရပါမယ်။
လှော်ထားတဲ့ အရောကို ဆား ၊ ဟင်းခတ်မှုန်.တို.နဲ.အတူ ညှက်နေအောင်ရောထောင်းပြီး..
မီးဖုတ်ထားတဲ့ ကင်းပုံသီးတွေထည့်ကာကျည်ပွေ.လေးနဲ.ပွတ်ချေ ပေးလိုက်ရုံပါ..။
Posted in: ကင်းပုံပင်/သီး